KULAMADA UGU SAREEYA EE LOOGU TALAGALAY XBOX 360 IYO ONE 2018: DARAJADA SARE EE 10 - DHIBAATOOYINKA CIYAARAHA - 2020
Ugu Weyn Ee Dhibaatooyinka ciyaaraha
10ka kulan ee ugu fiican ee loogu talagalay Xbox 2018
Kulamada ugu wanaagsan ee Xbox One ee 2018 ayaa loo ogol yahay in dadka isticmaala ay safar dheer u galaan raadinta kaydka burcad-badeedda, si ay u noqdaan kaaliyeyaashaha shariifka ah ee baaritaanka arimaha adag, iyo sidoo kale in ay ku soo dhex galaan arrimaha nabadgelyada leh - si ay u noqdaan beeralay sahlan mudo, waxay iska iibiyaan. Fursado aad u ballaadhan oo dheeraad ah - cayaaraha ugu wanaagsan ee Xbox 360: sanadka 2018 wuxuu ahaa waqtiga ugu muhiimsan taageerayaasha qoob ka ciyaarka, kubada cagta iyo taangiyada.
Cayaaraha ugu sareeya 2018 ee Xbox One
Dib u Celinta Bisha Cas 2
Aad u ooyaa 5
Farmashiyaha Simulator 2019
Monster Hunter: Dunida
Kulamada ugu fiican ee 2018 loogu talagalay Xbox 360
Just qoob ka ciyaarka 2019
Inta badan mashaariicda xiisaha leh ee sanadka Xbox One waa kuwa rusheeyayaasha ah, ficilka uu ka muuqdo qaybo kala duwan oo dunida ka mid ah: laga bilaabo waddanka Mareykanka ah ee la abuuray jasiiradaha qarsoon ee badda.
Muuqaalka shakhsigii saddexaad ee shakhsiga ah waa arin aad u liidata Arthur Morgan, oo ah wakiilka caadiga ah ee gangster Wild Wildlife. Iyada oo qayb ka ah koox burcad ah oo 20 qof ah, wuxuu ku lug leeyahay isku day uu ku lumiyo bangiga, taas oo aan ku guulaysan. Hadda dadka weerarrada nasiib darada ah waa inay qariyaan. Oo markaa kadib ma aha oo kaliya shaqaalaha hay'ad qaran, laakiin sidoo kale wakiillo ka socda baandada.
Dareem sida koofbada West West
Ciyaarta shabakadda ee shabakada video-ga ah oo lagu daray xeelad xeeladaysan, cayaarta ciyaaraha iyo istaraatiijiyada. Isticmaaluhu wuxuu leeyahay xulasho dhinaca dhinac ah si loola dagaallamo:
ku soo biirida safarada Mareykanka ee Marine Corps;
taageeraan Ciidanka Xoraynta ee Shiinaha;
noqdaan dagaal yahanka isbahaysiga Bariga Dhexe.
Cayaartu waxay leedahay nidaam rikoodh cad, taas oo kuu ogolaanaysa inaad u kici karto taliyaha - nidaamka ayaa dooran doona kuwa ugu khibrad badan ee codsadayaasha helay kasbashada dhibcaha ugu badan.
Waxaad dooran kartaa dhinaca ay ku ciyaaraan
Ciyaartu waxay ka dhacdaa gobolka Mareykanka ee qiyaaliga ah, halkaas oo sheriff maxalliga ah ay ku xiran tahay diin khatar ah. Dunida furan ee ciyaarta waxay kuu ogolaaneysaa inaad si xor ah u socoto, iyo tafaftirka astaamaha wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso tiro astaamo ah astaamaha, oo ay ku jiraan midabka maqaarkiisa. Waxaad sidoo kale dooran kartaa iyo hub. Dhulka waxaa ku yaal qoryo, qoryaha mashiinka, qaansooyinka iyo xitaa Molotov cocktails.
Doorashada weyn ee hubka ayaa kala duwanaata ciyaarta.
Cajaladda cayaarta ayaa ah waa dambiile oo fuliya howlaha caalamka. Hitman 2, dilaaga waa in uu lix qaybood oo kala duwan ka fuliyaa wadamada kala duwan - laga soo bilaabo kaymaha kuleylka ah ee kulaylka ah ee loo yaqaan "megalopolises" kuwaas oo ka baxa kulaylka waddooyinka. Marka la barbardhigo qeybtii kowaad ee ciyaarta, dhowr nooc oo cusub ayaa soo muuqday halkan, oo ay ka mid tahay suurtogalnimada habka multiplayer.
Socda waddooyinka oo dhan iyo hawlaha dhamaystiran
Horay u jeclaa by gamers, simulator ee 2019 noqday xitaa xiiso badan. Sidii hore u ahayd, isticmaaluhu waa inuu dhisto beerkiisa oo wuxuu abaabulaa shaqadiisa guuleysata. Haatan arjiga macnihiisu waxa weeye kordhinta tiknoolajiyadda cusub ee Maraykanka iyo Yurub ee beerista, beerashada, bacriminta iyo goosashada. Intaa waxaa dheer, ciyaaryahanka waa inuu muujiyaa xirfadahooda ganacsi, sababtoo ah dalagyada waa in aan la goostin oo kaliya, laakiin sidoo kale lagu ogaaday faa'iido.
Naqshad wanaagsan oo ku saabsan simulator aad jeceshahay
Qaybta soo socota ee taxanaha caanka ah ee Monster Hunter, ciyaaryahanka ayaa la kulmi doona tiro badan oo ah xayawaan aad u khatar badan. Nolol fara badan oo la heli karo. Cayaartu waxay ku lug leedahay ilaa afar ciyaaryahan. Iyaga oo qashinka ah - Arxan weyn oo hub ah iyo habab difaac ah oo ka soo horjeeda miyir-beelka waaweyn. Mid ka mid ah sifooyinka cayaarta ayaa ah in ay tahay in loo gudbiyo si aad u fikir ah si aysan u sameynin qaladaad khatar ah. Sidaa darteed, waxaa habboon in la diyaariyo horay: ujeedadu waxay qaadan kartaa waqti badan.
Ciyaartu waxay ku fiican tahay taageerayaasha sheekooyinka
Ciyaar macmacaan leh adduun furan ayaa u ogolaanaya dadka isticmaala inay dareemaan sida dhabta ah "boodhka badda" - hanti dhawr ah. Si aad u hesho kharashka, ciyaartoydu waa inay ka qeybqaataan dagaalo badan oo kala duwan oo sahamiyaan in ka badan hal jasiirad sawir leh. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeceshahay, cayaartu waxay fursad u heleysaa in isku daydo naftooda iyo doorarkooda gebi ahaanba kala duwan: Ganacsiga nabadda, milkiilaha heeshiisa gaarka ah ama kuwa tuugada leh ee weerara maraakiibta kale ee dadka.
Kulankan waxaad ku raaxeysan doontaa sawirro dhalaalaya iyo xiiso xiiso leh.
Wareega sare ee loogu talagalay Xbox 360 muddo 12 bilood ah waxoogaa ah. Isla markaa, waxay u soo jeesteen in loogu talagalay dhagaystayaal aad u kala duwan.
Kobcinaha kubada cagta ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato mid ka mid ah hababka cayaaraha ee dhowr ah, tiradaas oo ku jirta qaybta cusub ee mashruuca ayaa si weyn u kordhay. Tusaale ahaan, qaabka "Qodobada Xeer-dejinta" uma ogola ciyaartoyda aan xishood lahayn (iyadoon helin digniino) taas oo khatar ah. Iyadoo "Habka Badbaadinta" uu yareeyo tirada kooxaha ka dib markii goolal kasta uu dhaliyay, ka saarista hal ciyaaryahan oo ka socda xulka qaranka. Noocyada aan la filaynin waxaa bixiya "Ciyaar si aad u ...": halkaan oo ah qofka isticmaalkiisa ayaa go'aaminaya xeerarka qaar ka mid ah ciyaartoyda waxaana uu galayaa goolasha ay dhaliyeen kooxaha. Marka laga soo tago kubadda cagta, waxaa jira sheeko ganacsi ee ciyaarta: ciyaartoyda xiddigaha ah waxay hadda bilaabi karaan magacooda oo ay ka helaan faa'iidada.
Mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan sannadihii la soo dhaafay.
Qaybta cusub ee cayaaraha hore ee muusikada iyo qoob ka ciyaarka. Marka la qoondeeyo qoob-ka-ciyaarka waa liis dheeri ah oo lagu ciyaaro (waxaa kordhay 40 heeso oo cusub), iyo sidoo kale dhowr waxyaabood oo dheeraad ah. Sidaa daraadeed, siddeed caruureed oo carruurta ah, oo gaar ahaan loogu talagalay mashruuca khabiirada horumarinta ilmaha, ayaa lagu daray ciyaarta. Hadda, carruurtu waxay sidoo kale awoodaan inay isku dayaan qoob-ka-ciyaarka Just Dance, waxaana lagu taageeri doonaa nidaam qiimeyn karti shaqsi ahaaneed iyo dhibcooyinka dhibcaha dhibcaha, iyo sidoo kale macalimiinta qoob-ka-cayaar ee carruurta si gaar ah loogu soo bandhigay ciyaarta.
Waxay u fiican tahay carruurta iyo dadka waaweyn.
Taxanaha Tikidhada Tikidhada Tiknikada ee ka soo jeeda Belarusian ayaa soo saaraya mashruuca heer cusub oo tayo leh. Dareenka dadka isticmaala waa gawaarida dagaalka, taas oo aan si fudud ku jirin dabeecadda. Qaar badan oo ka mid ah waxay isku dhafan yihiin isbeddel xiiso leh oo ka yimaada abuurayaasha taangiyada ee dunida oo dhan. Tusaale ahaan, meydadka qaar ka mid ah Beeluhu waxay u soo jeesteen inay yihiin Soviet, munaarad, Maraykan, iyo qoryaha, Jarmal. Ciyaarta ayaa sidoo kale heshay tiro cusub oo cusub - waxa ay noqotey mid adag oo adag, sababtoo ah ciyaaryahankan ayaa haatan wajahaya ciidamo dheeraad ah oo ka mid ah mercenaries.
Qaabka cusub ee ciyaarta ugu fiican
2018-ka ma niyad jabin milkiilayaasha Xbox One iyo Xbox 360. Kulamada cusub ee laga soo bilaabo Jannaayo ilaa Diseembar waxay suurtageliyeen in ay waqti ku qaataan ma ahan mid xiiso leh, laakiin sidoo kale faa'iido leh: in ay ku fido dhaqanka dalal kale, si ay u horumariyaan aqoontooda ganacsiga iyo barashada qoob-ka-ciyaarka - iyada oo la raacayo hagayaal la-taliye-yaqaan ah.
Maqnaanshaha dhawaaqa kombiyuutarka - maxaad samaynaysaa?
Barnaamijyada loogu talagalay abuurista qaabka Minecraft
Ku xidho taladaada taleefanka Samsung Galaxy - waxa ay tahay iyo sida loo saaro
Horudhaca Microsoft Excel
Sawirqaadayaasha iyo scanners
Tilmaamahan loogu talagalay bilowga, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu furayo shaashadda furan ee Windows 10 (xittaa laba shaashadood oo kumbuyuutarro ah), iyo sidoo kale in lagu xaliyo dhibaatooyinka caadiga ah: tusaale ahaan, waxa la sameeyo haddii kumbuyuutarka furan uu soo baxo markaad furayso barnaamij kasta oo gebi ahaanba iska daayo ma shaqeynayo ama looma baahna - waxa la sameeyo haddii aysan soo jeedin. Read More
Fursadaha loo marayo Siyaasadda Nabadgelyada Deegaanka ee Windows 7
Hirgeli ama macquul ah macruufka Microsoft Excel
https://termotools.com so.termotools.com © Dhibaatooyinka ciyaaraha 2020